ONN: ABOn OPDO waliin haasawuuf qophiidha Dr Shugut Galata fi Obbo Odaa Xasee kutaa 2ffaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioONN: ABOn OPDO waliin haasawuuf qophiidha Dr Shugut Galata fi Obbo Odaa Xasee kutaa 2ffaa.
ONN: ABOn OPDO waliin haasawuuf qophiidha Dr Shugut Galata fi Obbo Odaa Xasee kutaa 2ffaa.Adooleeysa 14/2018
SAGALEE QEERROO:Adoolessa 13,2018
1. Namoonnii hedduun fuula kitaabaa kanarratti maaliif #Taayyee_Danda‘aa ABO balaaleffata jecha turtaniittu. Animmoo namoota bara 1996 kaasanii osoo hin hidhaminii fi mana hidhaatti isa beekaan irraa argadhe haa sinii himu. Dubbichis gabaabinaan kana. Taayyeen gaafa barataa Unv. Finfinnee ture Sana barataa cimaafi gumii GDASAO keessatti namoota warraaqii cimaa gochaa turan keessa tokko ture.
2. Kanumaan sagaltamoota keessa yeroo barattoonni Oromoo fincila kaasan san innis qabsoo barattootaatti makamee ture. Kanumaan haalli biyyaa keessa ture waan itti ulfaateef, qabsoo yeroo sana ta’aa ture sochoosaa kan turan miseensotaa fi dabballoota ABO ta’uun beekamaadha. Yeroo kanatti #Taayyeen namota cimodha jedhamee dabballee biyya keessaan filamee gara #zoonii_bahaatti ergame.
3. Taayyeen achi gayee torban lama hin guunnee kan jiruu jireenya bosonaa ifatee, biyyaa alaa akkan bawuuf visa naakennaa ta’uu baatus gara biyyaatti na deebisaa jedhee alaandhaluu eegallaan dhaabni qabsoon biyya alaa taa’anii gaggeessan qabsoo poropogaanda qofa kanaaf ammo nama hedduu qabna jechuun akkanni gara biyyaatti deebi’ee hojjetuuf gara biyyaati deebi’uusaa jaalli yeroo sana waliin turan ragaa naaf bayeera. Taayyee garuu achii deebi’ee jaalala ABO osoo hin ta’iin jibbinsaa fi farra qabsoo Oromoo ta’uu jalqabe.
4. San booda dhaaba haaraa “Adda Walabummaa Oromoo “(AWO) jedhu hundeesuuf fiiga osoo jiruu mana hidhaa seene. Hidhaa waggaa kudhaniit itti murtaaye. Garuu inni hidhaa kana akkuma hidhamtoota kaanii “obsaafi murannoon ” xumuruu hin dandeenye. Hidhaa waggaa sadii booda garee “Dhiifamaa” jechuun namoota haamlee dhabeeyyii ta’an qindeessee bara 2003 kaasee diina jala fiigaa ture.
5. Jaallan hedduu mana hidhaa Baatuu/zuwaay yeroo sana waliin turan hedduu kaayyoo ABO barsiisaa jiru jechuun mana dukkanaatti darbisiisaa ture. Kanaan dhiifamaan erga gad bayee opdo kaleessa jibbuutti kooluu galtummaa gaafatee itti gale. Siyaasa kaleessaa ABOn isa qareen har’a deebisee ABO muruuf shubbisaa jira.
6. Yaa Taayyee ABO balleessuu sidhiisii Abbaa Duulaafi Kumaa Dammaksaayyuu dokumantarii sobaa uummata #Baddannootiin hojjetan sunuu dhumnisaa kasaaraa siyaasa har’a ADWUIn keessa jirutti isaan kuffise. Afaankee sassaabbadhuu ifirraa taa’i!!!-Kutaa itti aanutti Kan Milkeessaa Miidhagaafi lkanbirootu itti fufa. Qeerroo dubbiin jirtu kana
Nuuf galaa jira…….?
🚫 abdii abdachaa turtan isa dhumaa kuttadha warri Oromoo qulqullu taatan.
🚫Ragaan kana caalu hin jiru kalee Oromoo
100 ol ficisisanii waliin shubisuun.
Yoo siif galee saba kee qulqullu barsisii dadamaqsi mirga keef falmadhu.
Isa Malaas jedhe rawatama jira,
” Lafas lakkofasa ummataa nii xiqeessina ”